नेपाल मेडिकल कलेजमा तोडफोड
द नेपालटप | प्रकाशित: २०७५-११-३० गते
काठमाडौंः बुधबार राति नेपाल मेडिकल कलेजको अस्पतालमा तोडफोड भएको छ । उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गरेका हुन्।अस्पतालका एक कर्मचारीका अनुसार प्यांक्रियाटाइटिसका एक बिरामी उपचारका क्रममा ‘सक’मा गएका थिए । उनको आइसियुमा सिफ्ट गर्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा काँगेश्वरी मनोहर नगरपालिकाका ४५ वार्षिय सुर्दशन फुयाँल रहेको बुझिएको छ।
मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरबाही भन्दै तोडफोड सुरु गरेका थिए । अस्पतालका सिसा, टेबुल, कुर्सी, झ्याल, केही उपकरण र गाडी समेत क्षति पुगेको देखिएको छ। अस्पतालमा क्षति रोक्न पुगेको प्रहरी र मृतकका आफन्तबीच झडप समेत भएको थियो । यसक्रममा मृतकका छोरा सहित केही व्यक्ति सामान्य घाइते समेत भएको बुझिएको छ।
अस्पताल र बिरामीका आफन्तबीच राति नै सहमति भइसकेको बताइएको छ । अस्पतालले भने यस बारे विस्तृतमा जानकारी दिन चाहेन । कलेज सञ्चालक मध्येका एक डा भोला रिजालले भने, ‘अलिकति थोरै केस भएको थियो । तोडफोड भन्दा पनि अलिकति थोरै बाहिरबाट आएका मान्छेले तोडफोडको प्रयास गरेछन् । अरु केही होइन।’
डेगुं के हो ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय
काठमाडौं : डेगुं प्रायःजसो गर्मी र वर्षा याममा हुने गर्छ । घना बस्ती भएका शहर र अन्य स्थलहरुमा यो बढी हुनेगर्छ..
कपाल स्वस्थ र सिल्की बनाउने घरेलु उपाय
मनिसहरुको आफ्नो कपाल राम्रो बनाउने सोख हुन्छ । कसैलाई लामो कपाल मन पर्छ भने कसैलाई छोटो र कसैलाई घुमेको कपाल मन पर्..
क्रिमको प्रयोग बिना अनुहारलाई यसरी सुन्दर बनाउनुहोस्
मानिसको सुन्दरताको एउटा प्रमुख कडीको रुपमा पनि अनुहारलाई लिन सकिन्छ् । तर अनुहार राम्रो पार्न व्युटी पार्लर नै धाउन..
डा. भगवान कोइराला वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुन् । चिकित्सकीय क्षेत्र बढी व्यस्त रहने पेसा हो । आमडाक्टरजस्तै डा. कोइ..
काठमाडौं : डेंगु रोगले पूर्वी क्षेत्रमा उग्ररूप लिए पनि नियन्त्रण र अनुसन्धान सुस्त छ । सुनसरीको धरानबाट एक मह..
मुखभित्र घाउ भएकाे छ ? एप्थस अल्सर भएकाे हुन सक्छ
यदि मुखमा पटकपटक घाउ आउने तर एकदुई हप्तामा आफैं निको भएर जाने गरेको छ भने एप्थस अल्सर हुनसक्छ । मुखमा आउने घाउ एकदम..